Zvakajairika Zvikonzero Ita Shanduko OST Faira Inherera
musha Products DataNumen Exchange Recovery Zvakajairika Zvikonzero Ita Shanduko OST Faira Inherera
Zvakajairika Zvikonzero Gadzira Microsoft Shanduko OST Faira Inherera
Iyo Shanduko isingabvumirwe fodhi (.ost) faira iri yemuno uye isingaite kopi yebhokisi retsamba pane Exchange server. Chero nguva iyo mailbox iri pane server isingawanikwe zvachose, iyo OST faira inonzi inherera.
Pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti yako Chinjana kunze kwenyika folda (.ost) faira nherera. Isu tinovaisa mumapoka maviri, kureva, zvikonzero zvehardware uye zvikonzero zve software.
Chero nguva yako Hardware painokundikana mukuchengetedza kana kuendesa iyo data yeako Exchange Server dhatabhesi (.edb), dambudziko redata rinoitika uye sevha inopunzika. Panguva iyoyo, OST mafaira achaita nherera. Kune anonyanya marudzi matatu:
Data Kuchengeta Midziyo Kukundikana. Semuenzaniso, kana rako rakaoma dhisiki riine zvimwe zvakashata zvikamu uye yako Shanduro Server dhatabhesi zvakachengetwa pane izvi zvikamu. Ipapo pamwe unogona chete kuverenga chikamu chedhatabhesi faira. Kana iyo data yaunoverenga haina kunaka uye izere nezvikanganiso. Uori hwakadai hwe data huchaita kuti dhatabhesi irege kuwanikwa uye yako OST faira nherera.
Simba Kukundikana kana Shutdown Server Zvisingatarisirwi. Kana kukundikana kwemagetsi kukaitika kana iwe ukavhara iyo Exchange server zvisizvo kana iyo Server server iri kuwana dhatabhesi, ipapo izvo zvinogona kukonzera dhatabhesi rako kukuvara uye yako OST faira nherera.
Mutongi Kadhi Kusashanda kana Kukundikana. Kana caching controller ichishandiswa neSeva Server, kusashanda kwayo kana kutadza kunokonzeresa rese rakachengetwa data lost uye huori hwe database, saka kugadzira iyo OST faira nherera.
Kune hunyanzvi hwakawanda hwekudzivirira kana kudzikisira iyo Server Server dhatabhesi huori uye iyo OST faira kuitwa nherera nekuda kwematambudziko ehurdware, semuenzaniso, UPS inogona kudzikisira matambudziko ekutadza kwemagetsi, uye kushandisa zvakavimbika zvishandiso zvemidziyo zvinogona zvakare kudzora mikana yehuori hwe data.
Uyewo Shandura OST faira rinogona kuve nherera nekuda kwesoftware zvine chekuita nenyaya.
Delete, Disable, kana Ramba Kuwanikwa kweMailbox pane Exchange Server. Kana iro bhokisi retsamba riri paServer Server inoenderana ne OST faira rinodzimwa kana rakaremara neako server mutariri, kana kupinda kwako kubhokisi retsamba kunoramba. ipapo yemuno OST faira inherera uye unofanira kuvimba nayo DataNumen Exchange Recovery kutora zvirimo mubhokisi rako retsamba.
Virus kana Imwe Yakashata Software. Mazhinji mavhairasi anokanganisa nekukuvadza iyo Shanduro Server dhatabhesi uye voita kuti isashande, izvo zvakare zvichaita iyo OST faira nherera. Inokurudzirwa kwazvo kuisa mhando anti-virus software kune yako Shanduro Server system.
Kusashanda Nyamavanhu. Kusashanda zvakanaka kwevanhu, kwakadai sekubvisa dhatabhesi nekukanganisa, kutsaura mushe dura rekuchengetera, kutomesa zvisirizvo sisitimu yekushandisa, zvese zvinoita kuti dhatabhesi reS Exchange Server riwanikwe, nekudaro voita kuti OST faira nherera.
Gadzirisa Nherera OST Files:
Kana zvako OST mafaera ari nherera, iwe uchiri kugona kushandisa yedu yekuhwina mubairo-chigadzirwa DataNumen Exchange Recovery to dzosa iyo data kubva kunherera yako Exchange OST mafaira, kuti utore zvirimo mubhokisi rako retsamba zvakare.